जान्नुहोस् ! ब्रेकअपपछि एक्स पार्टनरलाई सामाजिक सञ्जालबाट ब्लक गर्ने की न गर्ने ? – MediaNP
जान्नुहोस् ! ब्रेकअपपछि एक्स पार्टनरलाई सामाजिक सञ्जालबाट ब्लक गर्ने की न गर्ने ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:५५0
काठमाडौँ । प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि सजिलै बिर्सन कहाँ सकिन्छ र ? सम्बन्ध टुटेर भौतिक शरिर टाढा भएपनि भावनात्मक पिडाले पिरोलिरहेको हुन्छ । अझ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका ती अतितहरुले त पिडालाई बारम्बार बल्झाइदिन्छ । यद्यपी जो बिगतलाई सम्झेर झस्किरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले वर्तमान बिगार्ने ? के आफ्नो गर्लफ्रेण्ड वा ब्वाई फ्रेण्डलाई फेसबुक लिस्टबाट हाउने गर्दा सजिलै भुल्न सकिन्छ त ।
सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका कुराहरुले ब्रेकअप पछिको पिडा निम्त्याउँछ निम्त्याउँदैन् त्यो भन्दा पनि ब्रेकअप पछि अर्को पार्टनरसँग सहजै अगाडी बढेको देख्दा मनमा चसस्क पिडा हुन्छ । ब्रेकअप पछि पार्टनले अरुसँगको तस्वीर सेयर गरेको देख्दा आफुलाई अगाडी बढ्ने अवसर नै हुँदैन् । आफ्नो पार्टनर सम्झेर दिन रात अनलाइनमा पछ्याइरहेको समयले पनि पिडा दिइरहेको हुन्छ ।
असहजता : यदि तपाईको ब्रेकअप भइसकेको पार्टर अनलाईनमा जोडिएको छ भने तपाईको नयाँ सम्बन्ध सुरु हुन लागेको ठाउँमा बाधक बन्छ । हरेक पोष्ट गर्नुपूर्व एक्स पार्टनरले के सोच्छ होला भन्ने प्रश्न मनमा आइरहन्छ ।
नदेख्दा सजिलो : उसलाई नदेख्दा जीवनलाई अगाडी बढाउन समस्या हुँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिसँग सामाजिक सञ्जालमा नजोडिदा नै राम्रो हुन्छ । यदि उसलाई नदेख्दा आफुलाई समस्या हुन्छ भने सामासिजक सञ्जालमा जोडिरहँदा केही समस्या हुँदैन् । तर उसको याद आयो भन्दैमा ब्लक र अनब्लक गर्ने काम गर्नु हुँदैन् ।
ब्लक गर्दा दुःख : यदि उसँग जोडिएका कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा छन् भने ब्लक गर्दा सबै हराउँछ । त्यसकारण पहिले नै यस्ता कुरालाई ध्यान दिएर ब्लक गर्नु हुँदैन् । त्यसको लागि केही समय कुर्न पर्छ । जब त्यसको प्रभाव कम हुँदै जान्छ तब मन बलियो हुँदै आउँछ ।
चिनजानका साथीहरुसंग अनावश्यक लफडा हुँदैन : यदि तपाईले एक्स पार्टनरलाई ब्लक गरेको छ भने म्युचुअल साथीहरुसँगको सम्बन्धमा असर आउन सक्छ ।
चलचित्र प्रेमगीत ३’ बन्ने पक्का ! प्रदीपका लागि हिरोइन खोज्दै सन्तोष , यसरी भर्नुस् फारम
बार्सिलोना विरुद्ध सनसनपूर्ण जित निकाल्दै लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा